Berbera: Duur-Xulkii Sandheere, Doodii Maxamud Xaashi, Dareenka Maareeyaha Cusub Iyo Xadiga Lacagta La Wareejiyey | Hubaal Media	Home
HUBAALMEDIA.COM Berbera: Duur-Xulkii Sandheere, Doodii Maxamud Xaashi, Dareenka Maareeyaha Cusub Iyo Xadiga Lacagta La Wareejiyey
Berbera (Hubaal):-Maareeyaha iyo Maareeye Ku-xigeenka cusub ee Dekedda Berbera, ayaa shalay xilka kala wareegay dhiggoodii hore ee dhawaan Madaxweynaha Somaliland xilka ka qaaday, waxaana xilka u kala wareejiyey Wasiirka Madaxtooyada Maxamuud Xaashi Cabdi oo uu Maamulka Dekeddu Wasaaraddiisa hoos-yimaaddo. Munaasibad loo sameeyey xil-warejintaas oo lagu qabtay xarunta Dekedda Berbera, waxaaka qaybgalay Masuuliyiin kala duwan oo Xildhibaanno, Wasiirro, Mudanayaal Gole deegaan, Madaxda Waaxya kala duwan ee Dekedda iyo Marti-sharaf kale ayaa ka qaybgalay. Waxaanu Maareeyihii hore ee Dekedda Eng. Cali Xoor-xoor wareejiyey Lacag dhan Afar Malyan iyo Sagaal Boqol oo Kun oo Doollarka Maraykanka ah.
Maareeyihii hore ee Dekedda Berbera Eng. Cali Cumar Maxamed (Xoor-xoor), ayaa ka warramay horumarka uu ka sameeyey Dekedda afartii sano iyo badhkii u dambeeyey ee uu xilka hayey intii ay Xukuumadda Siilaanyo joogtay, waxaanu yidhi; “Immika afar sano iyo dheeraad baan joogay Dekedda doorkan, intaaba shaqadu meel bay maraysay, runtii intaas shaqo badan baannu qabannay, annagoo iskaashi Dekedeed ku hayna meesha oo Shaqaale-waynaha iyo Muruq-maalka waxaannu dhisnay dhisme badan oo Dekeddu leedahay.”
Cali Xoor-xoor oo sharraxaaddaas sii watay waxa uu yidhi; “Dhismaha waxay dadku u yaqaannaan Daaraha la dhiso, laakiin Dekedaha waxa la dhisaa dhismayaasha dhulka ka hooseeya, dhismahaasi waxa uu qaadaa illaa Lix Kun oo Koonteenar oo Wajaale aannsu u bixinnay, Xagaa iyo Jiilaalba waannu ka shaqaynaynay, wax hore u jirayna may ahayn. Markaa, Maareeyaha cusub Axmed baan ku wareejinayaa, waxaanan kula talinayaa inuu halkaas ka sii wado.”
“Shaqada Dekeddu labadii sannadood ee u dambeeyey aad bay u korodhay. Waxa kale oo aan kugu wareejinayaa Lacag Account-ka (Sanduuq-Xisaabeedka) Dekedda ku jirta, waana Afar Milyan iyo Sagaal Boqol oo Kun oo Doollar. Waana Lacagtii loogu talo-galay Taagga (Gaadhi-badeedka Gacanka leh ee Maraakiibta Dekedda ku soo xidha).” Waxaanu sheegay Eng. Xoor-xoor in Taagga la soo iibin doono Shirkado u tartamay ay ka xusheen mid ka mid ah, isagoo Nashqaddiisa Sawir ahaan ugu wareejiyey Maareeyaha cusub ee xilka kala wareegay.
Maareeyaha xilka la wareegay ee Dekedda Berbera Axmed Yuusuf Dirir, ayaa isaguna halkaas ka hadlay, waxaanu yidhi; “Dekeddu aniga iguma cusba, illaa 17 sano waan marayaa kolba heeraan joogay-ba, khibrad fiican waan u leeyahay, intaa Maareeyuhu sheegayna waxa igu cusub waxa jira Heshiiskaa Itoobiya. Maareeyaha hore waxaan aad ugu mahad-naqayaa Geedkaan beeray oo midho-dhalay oo uu ka midho dhaliyey.”
Axmed Yuusuf Dirir waxa uu ka hadlay Shirkadda Dekedda lagu wareejinayo ee DP World, waxaanu ka warramay dareenka shaqaaluhu ka muujiyeen heshiiskaas iyo waxa uu ka rejaynayo. “1997-kii waxaan garanayaa Shaqaalaha 136 ah oo aan Mushaharkooda dejiyo, 36-ki way dhinteen, Boqolkii uun baa jooga, inta kale Shaqaaluhu halkan way iigu yimaaddeen, waxaanan leeyahay Shaqada halkii uun baynu ka sii wadi doonnaa. Shaqadu way innoo ballaadhatay, khayr badan baynu rejaynaynaa, immikana adduunkii baabaynu la jaan-qaadaynaa oo waatan Shirkad caalami ah oo la yidhaahdo Shirkadda China illaa Brazil oo labada koone ee adduunka ah ka shaqaysa innaguna haddaynu dhawr iyo toddobaatankaa dekedood ka mid noqonnay waa khayr.” sidaa ayuu yidhi Maareeye Dirir.
Waxaanu Maareeyaha Cusub ee Dekedda Berbera intaas ku daray; “Waxaan ogahay in dad badani ay ka shakiyeen (heshiiskan), haddii Gurigaaga aad Albaabka dhinaca kale u jeediso Carruurtaadu way shakiyayaan oo Aabbihiin muxuu xaggan ugu jeediyey albaabka, laakiin waa inaad fahansiisaa. Waxaan filayaa mishkiladda keliya ee dadku ka shakiyeen mustaqbalkoodii bay garan waayeen meesha uu ku sii jeedo, laakiin immika mugdigaa laydh baa loogu shiday, waanay arkayaan mustaqbalkoodu halkuu ku sii jeedo iyo inay noqon doonaan shaqaale caalami ah.”
Maayerkii hore ee magaalada Berbera Cabdalla Maxamed Cali, ayaa ka sheekeeyey wax-qabadka Maareeyihii iyo ku-xigeenkiisii hore sida ay wax uga qabteen Dekedda Berbera, isla markaana ku ammaanan yihiin oo wax badan ka qabteen. “Qofku maaha inuu Qalin iyo Buug haysto oo uu Xafiis fadhiyo ee Cali wuxuu suuragaliyey Dekedda Berbera inay noqoto Deked la aammino oo Maraakiibta waawayni ku soo xidhato. Cali intii aannu wada shaqaynaynay waxaan aad ugaga mahad-naqayaa Masaajiddada magaalada inuu dhiso oo nuuriyo, haddadanna mid buu gacanta ku hayaa, la iskamana yeelyeelo ee waa qofka Illaahay ku ilhaamiyo. Haddaan Kaftan raacsado Cali Xoor-xoor Bidixduu wax ku saxeexaa, Bidixdiisuna waa mid barakaysan, Somaliland oo dhamina waa ka markhaati.”
Xildhibaan Siciid Cartan Cismaan oo ka tirsan Mudanayaasha Golaha Wakiillada ee Saaxil laga soo doortay, ayaa isaguna halkaas ka hadlay, waxaanu yidhi; “Axmed Yuusuf Dirir markii uu sannad iyo badh joogay Dekedda isaga oo ceeb la oo aan wax cunfi ah iyo wax dhibaato ah midna muujini buu ka tegay, maantana isaga oo ceebla ayeynu xilka ku wareejinaynaa. Waxaan qirayaa Cali Xoorxoor inaanu ahayn Maareeye Dekeddan lixda boqol ee Mitir ah oo keliya Xukumayey ee uu ka mid yahay Rukumadda Somaliland ku taagan tahay, isla markaana uu yahay ninka qudha ee ay raalli ka yihiin Shicibka ku nool Somaliland Ceelaayo illaa Lawyo-caddo. Markaa, waxaan leeyahay Caloow xilkii dowliga ahaa baa lagaa qaaday ee waxa kuu diyaar ah Somaliland oo qiimo kuugu kordhay mooyee waxba kaaga dhicin.”
Wasiirka Madaxtooyada Somaliland Maxamuud Xaashi Cabdi oo Masuuliyiintaas xilka u kala wareejiyey, ayaa soo gebo-gabeeyey Munaasibaddaas, waxaanu ka sheekeeyey wax-qabadka iyo dedaalka Maareeyihii hore Eng. Cali Xoor-xoor, waxaanu sheegay in taariikkhdu mid is-qarin karta ahayn, doorka Eng. Xoor-xoor ee horumarka Dekedda iyo Qarankaba uu ku leeyahayna la dafiri karin ee ay yihiin wax muuqda. “Cali waxaan jecelahay inaan ku hambalyeeyo dedaalkii uu ka sameeyey masuuliyaddii uu Qaranka u hayay iyo masuuliyaddii Dekedda oo wax badani ku soo kordheen.” Sidaa ayuu yidhi Wasiirka Madaxtooyadu. Waxaanu u duceeyey Maamulka Cusub.
Wasiir Maxamuud Xaashi waxa uu Kaftanka Maayerkii hore ee Berbera Cabdalla Maxamed Cali kaga jawaabay; “Kaftankii Saaxiibkay Cabddalle, waxaan leeyahay, Cali Gacantiisaa Bidixda la qir ee Axmed-na wuxu u qarinayey mooyee bal Midigtiisa aan eegno, reer Berbera Axmed Gacantiisa Midig way.”
Maxamuud Xaashi ayaa ugu dambayntii u duceeyey Maareeyaha Cusub ee Dekedda; waxaanu yidhi; “ Maareeyaha cusub isaga waynu u ducaynaynaa, lllaahay inuu xilkaa ku asturo inuu si masuuliyad leh u guto ayaanu ka rajaynaynaa, midna waa nasiib wanaagoo Maareye Axmed nin ku cusub halkan maaha, waa nin hore u soo xukumay, iyaduna wax weyn ayey ka qaadaynaysaa masuuliyadiisa cusub aqoontaa iyo fahankaa uu hore u lahaa. Masuuliyiinta Dekeda iyo madaxda halkan fadhida waxaanu ka rajaynaynaa in sidii ay Cali ula shaqeeyeen inay Maareeyaha cusubna ula shaqeeyaan, ee ay sigana shalay ula shaqeeyeen, waayo waxay midnimadeednu ku jirtaa inaynu wada shaqayno iyo inaynu iskaashano, xilkuna waa qori isu dhiib.”